2020 kacha mma onye na-emepụta Inflatables, Custom inflatables Factory | Ike
Anyị bụ ndị nrụpụta kachasị ọkachamara na-ere akpa ikuku 10000.
ANYI NA-EKWU EGO
Tomụ Toy dị ike bụ onye ibe gị kachasị mma ma ị na-atụ anya iji dochie olulu ụfụfụ na ebe a na-egwu trampoline ma ọ bụ ebe a na-egwu okpu ikuku, ma ọ bụ na ịchọrọ ka akpa ikuku buru ibu na-enweta ihe na-eweta ndekọ.
Tomụ Toy dị ike bụ onye ibe gị kachasị mma ma ị na-achọ idobe oghere ụfụfụ n'ime ogige trampoline gị ma ọ bụ ebe a na-eme egwuregwu mgbatị ahụ, ma ọ bụ na ị na-achọ ime ihe ndekọ na-agbasa n'ime nnukwu akpa ikuku. You chọrọ inwekwu ọ excụ n'okirikiri ụdọ gị dị elu, ka ị nwere nyiwe dị ugbu a ma ọ bụ ohere dị na ya? Na-achọ ebe ọhụrụ ị ga-etinye na ogige ntụrụndụ gị iji nyere gị aka nweta ego na-enwetakwu ego ma mekwaa ọnụ ahịa ọrụ gị? Stunt Airbag bụ ezigbo nhọrọ!
Mmemme ịrị elu maka ihe oriri na-ewu ewu maka ekeresimesi ekeresimesi
2020 Kachasị ngwa ngwa ụlọ ọrụ bekee na-amapụ maka ngwa ahịa na-eweta inflatable bouncer nke ekeresimesi maka ọnụ ahịa ekeresimesi, kpọtụrụ ụlọ ọrụ dị ike.
Ike 2020 Ọtụtụ ama ama Bmx Airbag, Custom Airbag Bmx Landing Ramp
2020 kasị asọmpi ma na-ewu ewu omenala bmx airbag, airbag bmx n'ichepụta maka ọdịda ramp, free 3d imewe, moq: 1piece, nnyefe ngwa ngwa, obere oge ndu, kpọtụrụ anyị ugbu a
Egwuregwu Arụrụrụ ọrụ ahaziri ahaziri nke 3d Free Sport Sportbagbagbag Powerful Powerful
factorylọ ọrụ ihe egwuregwu ụmụaka nwere ike ịgba bọọlụ na-enye egwuregwu a na-akwụ ụgwọ buru ibu, ọrụ akpa ikuku egwuregwu maka ndị ahịa ụwa niile, nkọwa ndị ọzọ gbasara egwuregwu nwere ike inflatable, na-ajụ ajụjụ ugbu a.
Airbag Airbag na ala nwere ike ikuku
for na-achọ airbag? Kpọtụrụ ụlọ ọrụ nwere ikike inflatable, 2020 kasị ewu ewu na inflatable ụmụaka ji egwuri egwu na-eweta ọkachamara ọdịda ala airbag, ihe ngosipụta nke ọma, ahụmịhe nke onye na-agba ya.
Anyị bụ otu n'ime ndị mbụ na-emepụta akpa ikuku na ọkachamara R& D otu.
Anyị na-etinye oke mkpa na mmepe ngwaahịa na nnwale. Progressga nke ọma bụ nchụso anyị. Tomụaka ndị dị ike erewo ihe karịrị akpa ikuku narị 10000. Anyị na-enye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ dị mma maka ndị ahịa gburugburu ụwa.
N'ihi nrụgide ya siri ike na nke dị mfe, BMX Airbag abụrụla airbag kachasị ewu ewu na ebe egwuregwu ski, ogige skate na ogige ịgba agba. The Air Track maka ọzụzụ! Igwe ikuku a na-aru oru zuru oke maka ihe omumu ala nile na ebe ndi ozo na-eme njem. Site na mmega ahụ rue parkour, site na kla-fu ruo na mmega ahụ, ọ bụ nnukwu ihe ndabere maka ụdị egwuregwu na ọzụzụ dị iche iche.
Ngwaahịa anyị dị na ọkwa dị oke mma. Anyị na-enye ọnụahịa asọmpi na ezi uche dị na ya. Anyị na-agba ahịrị imepụta ikike nke ukwuu. Anyị kwenyere mgbe niile na ogo adịchaghị mma, ọrụ dị mma, yana ọnụahịa asọmpi bụ naanị ụzọ iji nyochaa nnukwu ahịa. Anyị na-elebara nkọwa banyere nhazi, nrụpụta, usoro nhazi, na mbupụ ụgbọ mmiri.
Anyị bụ ndị nrụpụta ikuku akpa ụwa n’ụwa.
Ike Toys Co., Ltd bụ onye nrụpụtara nke inflatables. Anyị kwadebere nke ọma na ngwaọrụ nnwale na ike ọrụaka siri ike. Dị ka otu n'ime ndị na - emepụta inflatable inflatable na China, anyị enwetala aha maka ịdị mma na ọrụ n'ahịa ụwa, karịsịa na Europe, USA, Australia, na Middle East.
Pọtụfoliyo anyị na-efegharị Jump Airbag, Bumper Ball, inflatable tent, Field Field, Bouncers, inflatable Play Ground, slide, Combo, mgbochi, egwuregwu egwuregwu, egwuregwu mmiri, ọwa mmiri, Modlatable, Arch, Cartoon ekeresimesi, PVC Balloon, ikuku Dancer, Roller Ball na ngwaahịa ndị dị ka inflatable inflatable.